बलिउडको परिवर्तित ट्रेण्डका बारेमा अभिनेता अर्जुन कपूर
फिल्मसंग अभिनेता अर्जुन कपूरको नाता बाल्यकालदेखिके हो । उनी फिल्मी परिवारमा हुर्किएकाले पनि उनले सानै उमेरदेखि फिल्मलाई बुझ्ने मौका पाए । त्यसैले पनि उनी फिल्म उद्योगदेखि लिएर स्टारहरुको स्टारडमसम्म समयसंगै आएको परिवर्तनलाई पनि राम्ररी देखेका, बुझेका छन् । हालै एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा अभिनेता कपूरले परिवर्तनशील हीरोइज्म, स्टाडम आदिका बारेमा खुलेर कुराकानी गरेका छन् ।
एउटा समय थियो, जब फिल्मका हिरो ती हुन्थे, जसले भिलेन तथा उसका दर्जनजति चम्चाहरुलाई एक्लैले सिध्याउँथे, जो समस्यामा परेकी हिरोइनलाई बचाउन ठिक समयमा पुग्थे, जो पुरै शहरका रक्षक हुन्थे ।
तर, आज बलिउडमा हीरोको महत्वमा परिवर्तन आइसकेको छ । अब फिल्म ‘लञ्च बक्स’ का अधवैंसे विधुर साजन फर्नान्डिस पनि हीरो हुन् भने फिल्म ‘की एण्ड का’ मा भान्सा सम्हाल्ने कबीर पनि हीरो हुन् । अभिनेता अर्जुन कपुरका अनुसार अब रियालिस्टिक फिल्महरुको समय प्रारम्भ भैसकेको छ र यो परिवर्तनको कारण केवल दर्शक हुन् । उनका अनुसार पहिलाका फिल्ममा सेलिब्रेसन हुने गर्दथ्यो भने अहिले दर्शकहरुलाई मास कन्टेन्ट होइन, क्लासको कन्टेन्ट पनि चाहिन्छ ।
पहिलाका जस्ता छैनन् दर्शक
अभिनेता अर्जुन कपूरका अनुसार आज दर्शकको चाहाना र आकांक्षा नै परिवर्तन भैसकेको छ । उनी भन्छन्-‘हाम्रा दर्शकहरु परिवर्तन भैरहेका छन् । अहिले आम दर्शकहरु नै शिक्षित छन्,त्यसैले उनीहरुको सोचाइमा पनि परिवर्तन आएको छ । पहिला फिल्महरु स्केपिज्म (वास्तविकताबाट टाढा भाग्ने_ का लागि बनाइन्थे भने अहिले दर्शकहरु फिल्मबाट सोच्ने तत्वको समेत खोजि गर्छन् । आजका मल्टिप्लेक्स दर्शकहरु पहिला भन्दा निकै समझदार तथा सेन्सिवल छन् । पहिला फिल्महरुमा सेलिब्रेसन हुने गर्दथ्यो । मानिसहरु पुरै परिवारका साथ मनोरञ्जनका लागि फिल्म हेर्न सिनेमा हलसम्म जान्थे । अहिले दर्शकहरुसंग त्यति धेरै समय नै छैन । डिजिटल जमाना छ, दुई घण्टाको फिल्म पनि लामो लाग्छ । पहिला फिल्म भनेको मास मेडियम हुन्थ्यो, जबकी टेलिभिजन निश्चित वर्गमा मात्र सिमिति थियो । त्यसपछि जब केवल टेलिभिजनको जमाना आयो, त्यसमा घर–घरको कथा आउन थाल्यो । त्यसपछि टेलिभिजन नै मास मिडियम बन्न थाल्यो । अलग–अलग च्यानलहरु आए, मानिसहरुले घरमै बसेर मास कन्टेन्ट समेत हेर्न पाए, क्लासका कन्टेन्टहरु पनि हेर्न पाए । त्यसैले, अब मानिसहरुलाई सिनेमा हलसम्म तान्नका लागि मास तथा क्लासलाई उत्कृष्ट शैलीमा मिश्रण गरेर दिनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसो त, हामीलाई थोरै समय लाग्ने छ, तर मलाई लाग्छ फिल्म उद्योगले यो परिवर्तनलाई पनि स्विकार गरिसकेको छ । पछिल्लो केही वर्षमा हाम्रो सफलताको दर पनि बढिरहेको छ ।’
सोसल मिडियाले घटायो स्टारडम
के हीरोइज्मको परिवर्तित मान्यताका कारण विगतको तुलनामा अहिले स्टारडम पाउन तथा त्यसलाई कायम राख्न अझ बढि गाह्रो भएको हो रु भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा अभिनेता कपूरको भनाइ छ—‘सजिलो छ त म भन्दिन, तर निश्चित रुपले त्यो बेला स्टारहरुको एउटा आकर्षण थियो, एउटा रहस्य थियो । आज एउटा फिल्मका लागि म स्वयं ५ सय भन्दा बढि अन्तर्वाता दिन्छु । अत्यधिक फोटोहरु खिचाउ“छु र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुसंग भेट्छु । यो हिसाबले म प्रत्येक दिन पर्दाबाट उत्रिएर धर्तीमा हिंडिरहेको छु, एउटा सामान्य व्यक्ति झैं । हुन त यो आजका दर्शकहरुको चाहना पनि हो । पहिला–पहिला स्टारहरु कहिलेकाहिंमात्र जमीनमा आउ“थे, त्यही बेला आक्कल–झुक्कल ओहो, यीनिहरु त यस्तो पो देखिंदा रहेछन्, यसरी नृत्य गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्थ्यो । आज म घरबाट निस्किरहेको बेला कुन रंगको पहिरन लगाएर वर्कआउट गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरा समेत आम दर्शकलाई थाहा भैसक्छ, यसले हाम्रो आकर्षक स्वतः घटाएको छ । यसले एक प्रकारको अपनत्व त आउ“छ, तर त्यो चमक, त्यो स्टारडम निश्चित रुपल कमै लाग्छ ।’
जति आफ्नोपन, उत्ति नै स्टारडम
स्टारडमको परिवर्तन स्वरुपका बारेमा अर्जुनको भनाइ छ-‘मलाई लाग्छ स्टारडम भनेको वास्तविक रुपमा तपाईंले आफूलाई कसरी परिचालित गर्नु हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तपाईं क्यामराको भित्र र बाहिर कस्तो हुनुहुन्छ, यो यी सबै कुराका मिश्रणहरु हुने । आज स्टारडमको अर्थ पहिलाको तुलनामा निकै नै परिवर्तन भैसक्यो । आजको परिस्थित पहिलाको भन्दा ठिक उल्टो छ । आज तपाईं जति सामान्य देखिनु हुन्छ, तपाईंको स्टारडम त्यति नै माथि हुन्छ । तर, यदि तपाईं मेरो व्यक्तिगत धारणा बुझ्ना चाहानु हुन्छ भने मेरो सोच केही पुरानो जमानाको जस्तो छ । मलाई के लाग्छ भने यदि तपाईंको फिल्मका लागि फाइदाजनक छ भने तपाईं कहिलेकाहिं आम दर्शकको बीच जान सक्नु हुनेछ, तपाईं त्यसका लागि सधैं उपलब्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तो बेला तपाईंको फिल्म चाहिं निकै नै उत्कृष्ट बनेको हुुनुपर्छ, किन भने त्यहा“ उनीहरुलाई तपाईं हेर्न आएका हु“दैनन्, फिल्म हेर्न आएका हुन्छन् । तपाईंलाई हेर्नु पर्यो भने त उनीहरु इन्स्टाग्रँम खोलिहाल्छन् नि ।’
सोसल मिडिया छाड्ने सोच
युवा स्टार रणबीर कपूरले आफूलाई सोसल मिडियासंग दुरी बढाउनुको कारण बताएका थिए-आम दर्शकमाझ स्टारहरुलाई लिएर एक प्रकारको कौतुहलता भैरहनु पर्छ, कतिपय कुरालाई रहस्यमै रहन दिनु पर्छ । रणबीरको उक्त मान्यताप्रति सहमति जनाउँदै अर्जुन कपूर भन्छन्-‘म धेरै हदसम्म रणबीरसंग सहमत छु, तर उनीमा त्यो क्षमता छ । उनी हाम्रो पुस्ताका पहिलो यङ स्टार हुन् । उनले ४–५ वटा त्यस्ता फिल्महरु गरेका छन्, जसबाट आफ्नै एक प्रकारको दर्शक बनाए, त्यसैले उनले आजको मितिमा सोसल मिडियामा गएर आफैंलाई बेच्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । उनी आफ्नो नीजि जीवनलाई गोप्य नै राख्न मन पराउँछन् । त्यसो त, मलाई थाहा छ उनी हरेक सोसल साइटमा छन् र अहिले जे भैरहेको छ, त्यो सबैका बारेमा उनी जानकार छन्, यो ठिकै पनि छ । उनले सोसल मिडियालाई त्यसरी नै प्रयोग गरेका छन्, जसबाट उनी खुशी पनि छन् । म आफैं पनि अभिनयमा आएको अघिल्ला तीन वर्षसम्म सोसल मिडियाबाट टाढै रहें । त्यसपछि के लाग्यो भने यसबाट मानिसहरुसंग कुराकानी गर्न पाइन्छ, त्यसैले मैले सोसल साइटमै सकारात्मक कुरा खोज्न थालें । कहिलेकाहिं त मलाई पनि सोसल साइटबाट बाहिरिउँ कि जस्तो लाग्छ, एकै क्षणपछि के लाग्छ भने नकारात्मक सोचलाई किन महत्व दिउँ ! तर पनि मलाई के लाग्छ भने सोसल मिडियाले कुनै पनि कलाकारको स्टारडम परिवर्तन हुनेवाला छैन ।’
दीपिकाले एयरपोर्टमा के गरिन् र भीडियो भाइरल भयो ?
छुच्चो बुढोको भेषमा अमिताभ बच्चन
बिग बसमा सलमानको पारिश्रमिक